छिमेकी र आफन्त मलामी नगएपछि मुस्लिमले गरे हिन्दू संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि – Dainik Sangalo
August 17, 2020 134
पर्सा – वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नं. १३ राधेमाई टोलको उत्तरतर्फ रहेको करवोला । जोगीको कुटी छ । त्यही कुटीभन्दा थोरै उत्तरपश्चिम हुँदै श्रीसिया नदी बगेको छ । त्यही नदीको किनारमा वडा नं. १३ ,१४ का हिन्दूको अन्त्येष्टि गर्ने घाट रहेको छ । आइतबार दिउँसो १ बजेको टण्टलापुर घाममा नदी किनारमा केही मान्छेहरु काठको मचान मिलाउँदै छन् । शव जलाउनको लागि काठको चाङ मिलाउनेहरु मुस्लिम समुदायका देखिन्छन् । मुस्लिम समुदायमा शव गाड्ने चलन छ । तर उनीहरु शव जलाउनका लागि दाउराको बन्दोबस्त गर्दै थिए । त्यति नै बेला वडा नं १३ का वडाध्यक्ष तुफान अन्सारी पनि घाट पुग्नुभयो।
घाटमा किरिया बस्ने र अरुको कपाल काट्नका लागि हजाम पनि लैजानु पर्छ । तर हजाम पनि नपाएको वडाध्यक्ष अन्सारीले बताउनु भयो । मृतकका सम्धीले किरियापुत्रीको कपाल काट्ने प्रयास गरे । तर जानेनन् । ‘म मुस्लिम हुँ मैले काट्दा पनि हुन्छ भने म काटिदिन्छु’ भनेर एम्बुलेन्सका चालकले प्रस्ताव गरेपछि त्यहाँ पुगेका हिन्दू सबैले हुन्छ भनेपछि हिन्दू किरियापुत्रीको केशको मुण्डन एक मुस्लिमले गरे । (उज्यालो अनलाइनका लागि केसी लामिछानेले लेखेक्यो सामग्री हामीले साभार गरेका हौ)
मोरङको विराटनगर महानगरपालिका-३ मा शनिबार राति ९ बजे एक ८७ वर्षीया वृद्धाको मृत्यु भयो। उनी कोरोना भाइरस संक्रमित नभए पनि संक्रमणमा पर्ने डरका कारण कोही मलामी भएनन्। घरबाट शव उठ्ने अवस्था भएन। तब छिमेकी र प्रशासनको समन्वयमा नेपाली सेनाले संक्रमितजस्तो गरी आइतबार साँझ उनको शव व्यवस्थापन गरेको छ।
Prevकालापानीमा देखियो यस्तो अनौठो दृष्य ! नेपाली शसश्त्र प्रहरीलाई भारतीय सेनाले दियो मिठाई र फूल, हेर्नुहोस् भिडियो
Nextस्कुल नखुले पनि यो बर्षको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन थालियो यस्तो तयारी
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि एक जनाको निधन